ဒီလရဲ့” ကျပ် သိန်း ၁ သောင်း ၅ထောင် ” ကံထူးရှင် အစစ်အမှန် ပေါ်ထွက်လာပါပြီ – ရှအေလငျး
ပထမ အကြိမ် သိန်း ၁၅၀၀၀ ( အ-၇၉၂၉၄၁ ) ဦးစန္ဒိမာ အေးမေတ္တာကျောင်း။
သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့် အလှူကုသိုလ်လုပ်သွားတဲ့ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ကျည်တောင်ကန်တောင်နီလေးကျောင်း ဆရာတော်ဘုရား သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆု ဆွတ်ခူးသွားပါပြီ။
ဆရာတော်ဘုရားပရဟိတလုပ်ငန်းများ ဒီထက်မက လုပ်နိုင်ပါစေဗျာ။
မကြာခင်နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ချောင်းသာမှ ကံထူးရှင် ဆိုတဲ့ သတင်းများမှာ သတင်းမှားယွင်းမှုများသာ ဖြစ်ပြီး ယခုလရဲ့ သိန်းတစ်သောင်းကံထူးရှင် အစစ်အမှန်မှာ ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာ ဖြစ်ပါတယ်….
ဒီလရဲ့” ကပျြ သိနျး ၁ သောငျး ၅ထောငျ ” ကံထူးရှငျ အစဈအမှနျ ပျေါထှကျလာပါပွီ
ပထမ အကွိမျ သိနျး ၁၅၀၀၀ ( အ-၇၉၂၉၄၁ ) ဦးစန်ဒိမာ အေးမတ်ေတာကြောငျး။
သမ်မတကွီးဦးဝငျးမွငျ့ အလှူကုသိုလျလုပျသှားတဲ့ ပုဗ်ဗသီရိမွို့နယျ ကညျြတောငျကနျတောငျနီလေးကြောငျး ဆရာတျောဘုရား သိနျးတဈသောငျးခှဲဆု ဆှတျခူးသှားပါပွီ။
ဆရာတျောဘုရားပရဟိတလုပျငနျးမြား ဒီထကျမက လုပျနိုငျပါစဗြော။
မကွာခငျနာရီပိုငျးအတှငျးမှာပဲ ထှကျပျေါလာတဲ့ ခြောငျးသာမှ ကံထူးရှငျ ဆိုတဲ့ သတငျးမြားမှာ သတငျးမှားယှငျးမှုမြားသာ ဖွဈပွီး ယခုလရဲ့ သိနျးတဈသောငျးကံထူးရှငျ အစဈအမှနျမှာ ဆရာတျော ဦးစန်ဒိမာ ဖွဈပါတယျ….
“အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးခြင်းကြောင့်…. လေဖြတ်နိုင်ချေ ၅ ဆ အထိ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖုန်းကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ အားသွင်းသင့်သလဲ။